कसरी मनसुन मौसममा पानी लग अनुभव सडक र सडक समस्या जोड दिंदै सम्पादक एउटा पत्र लेख्नुहोस् लागि देख? यहाँ हामी दिल्ली जस्तै मेट्रो शहर मा मनसुन मौसममा पानी लग समस्या बारे सम्पादक एउटा पत्र हुनुहुन्छ.
भारत को टाइम्स
विषय- मनसुन मौसममा दिल्ली पानी लग समस्या बारे जोड दिंदै
आफ्नो सम्मानित अखबार मार्फत म हरेक मनसुन मौसममा दिल्ली पानी लग को समस्या तिर चासो अधिकारीहरु ध्यान आकर्षित गर्न चाहनुहुन्छ.
यो एक बिट दिल्ली मा धेरै सडकमा र सडक को भागहरु हेर्न अनौठो केही दिन पहिले अनिरंतर वर्षा केही घण्टा पछि waterlogged भइरहेको थियो. यो शहर मा जल प्रणाली संग एक प्रमुख समस्या देखाउँछ. दिल्ली वर्षा जस्ता हरेक महिना अवधिमा वर्षमा मात्र केही हप्ता हुन्छ. तर त्यसपछि पनि शहर यसलाई सामना गर्न सकेन. स्थिति केही flyovers तलको सडक मा विशेष गरी खराब थियो. धेरै चालक पानी पूल मा असहाय भएपछि आफ्नो कार त्याग्न थियो. Waterlogging पानी संग माटो को संतृप्ति बुझाउँछ. जब नयाँ सडक निर्माण भइरहेका छन्, विशेष गरी कम झूट क्षेत्रमा, यसलाई उचित ड्रेनेज सिस्टम ठाउँमा राख्नु भनेर पानी चाँडै वर्षा को मामला मा भोकमरी छ त छ महत्त्वपूर्ण छ. भारत को एक राजधानी को रूपमा, यसलाई वर्षा को एक हिज्जे पछि भर सडक हेर्न incongruous छ.
हरेक वर्ष भारी वर्षा शहर को केही भागहरु waterlogging ग्रस्त बनाउन. को rainwater पूर्वाधार, यदि यो सबै मा अवस्थित, कम-झूट क्षेत्रमा सडकमा जलमग्न प्राप्त ताकि छैन पानी को जल ग्यारेन्टी गर्न पर्याप्त छ. सडक यातायात जाम गर्न प्रमुख अवरुद्ध गर्दै, पैदल भर सडकमा विशेष गरी शहरी गरीब मार्फत र उतारा छ, झुपडबस्तीमा वा squatters बस्ने आफ्नो घर अक्सर गरेर पानी क्षतिग्रस्त छ, जो धेरै दिन पछि हट्नु लाग्न सक्छ. तर waterlogging सबैतिर हुन्छ, धनी वा गरिब छिमेक मा कि. हरेक वर्ष अखबार मौसम रिपोर्ट वर्षा सुरु गर्न र मनसुन थप वा कम वर्षा भनेर चिन्तित अधिकारीहरूले बाबजुद अघि वर्ष भन्दा ल्याएको छ कि छैन भनेर आशा गरिन्छ जब सही मिति बारे जानकारी स्थिति व्यवस्थापन गर्न असफल भयो.
साथै पढ्नुहोस्: व्यावसायिक निबंध लेखकहरूले कसरी पत्ता?
हाम्रो mcd स्थिति व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त स्रोतहरू छ, तर सार्वजनिक र mcd को विफलता द्वारा dumping अनुचित फोहोर पानी लग झनै चर्काउने जो फोहोर संग डकगरिएको रही नाली लागि मुख्य कारण मध्ये एक छ. किनभने waterlogging मान्छे को पनि कहिले काँही मृत्यु गराउँछ सडक दुर्घटना जस्तै समस्या धेरै सामना गर्न छ, ट्राफिक जाम, त्यसैले लामखुट्टे वृद्धि र. हामी लोक प्राधिकरण भविष्यमा यस्तो समस्या रोक्न नयाँ अभ्यासहरू र उपाय गम्भीर पानी लग समस्या लिन र अपनाउने हुनेछ भन्ने आशा.
« शीर्ष 8 भारत आकर्षक तलब संग क्यारियर विकल्प
विश्व एड्स दिवस – डिसेम्बर 1, 2017 : निबन्ध, विषय, Slogans, उद्धरण, सन्देशहरू, कसरी मनाउन, भाषण »